Malunga nathi-KELU SHARE LIMITED
KELU SHARE LIMITED ithengwe ngo-2003 kwaye yafumana isiXeko saseDongGuan kwiPearl River Delta apho iphambili kwezona ndawo ziphambili kwezoqoqosho e-China. Inzuzo yejografi isenza ukuba sifumane ubonelelo olugqibeleleyo loncedo, oovimba bokuxhasa abaxhasayo kunye nenethiwekhi yokuphucula indlela.
Ngamava amaninzi aqokelelweyo, i-KELU iye yaqulunqa inkampani edibanisa iR & D, iMveliso, ukuThengisa kunye neNkonzo kunye. Singumboneleli ofanelekileyo wamashishini amaninzi adumileyo ekhaya nakumanye amazwe. Ukubambelela kwifilosofi "yoMgangatho wokuqala", i-KELU imema bonke abathengi abatsha nabadala kwihlabathi liphela.
Yintoni i-KELU ekhethekileyo kuyo?
Iitekhnoloji eziphambili ze-KELU zine-Metal Injection Molding (MIM) kunye ne-CNC Machining.
Sinikezela ngezinto ezahlukeneyo zesinyithi ezisetyenziselwa amashishini amaninzi kubandakanya izixhobo zoNyango, oomatshini, izixhobo zeMidlalo, i-Elektroniki, iprojekthi yomkhosi, ubuhombisa kunye nezinye iindawo eziphezulu.
Ukubumba inaliti yesinyithi (Metal Inalutionumbi (i-MIM) yitekhnoloji yohlaziyo edibanisa ukuBumba inaliti yePlastiki, ikhemistri yePolymer, isinyithi sePowder kunye nesayensi yezixhobo zeMetallic. Yinkqubo yokusebenza kwesinyithi apho i-iron e-powered powered ixutywe nenani eliqingqiweyo lezinto eziyimveliso ukwenza "isitya sokutya" kwaye emva koko siyilwe ngokubumba. Iimveliso zokugqibela ziya kuba yimveliso emva kokuxoxa, imisebenzi yokona.
I-MIM inokuvelisa indawo apho kunzima khona, okanye nokuba kungenakwenzeka, ukuyenza ngokufanelekileyo into kwaye iqaphela ukuchaneka okuphezulu, uxinano oluphezulu, ubunzima kunye nobungakanani bamacandelo amancinci.
Ukulawulwa kwamanani ekhompyuter (CNC) kukusetyenziswa kwezixhobo ngomatshini kusetyenziswa iicomputer ezenza ulandelelwano lwangaphambili lomyalelo wokulawulwa komatshini.